लुकेका रत्न युरोप अनि कसरी ट्रेन द्वारा त्यहाँ प्राप्त गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > लुकेका रत्न युरोप अनि कसरी ट्रेन द्वारा त्यहाँ प्राप्त गर्न
पढ्ने समय:5मिनेट(Last Updated On: 10/04/2021)
सबै पर्यटकहरु सपना देख्छन् युरोपमा लुकेका रत्नहरूको साथसाथै प्रख्यात युरोपीयन महानगरहरूको बारेमा पनि. तिनीहरूलाई एक फोटो खुसीसाथ एफिल टावरको छेउमा उभिरहेको, Colosseum वा बिग बेन सबैलाई असाधारण महसुस (र हामी पुरा तरिकाले प्राप्त गर्ने!). तपाईं एउटा हो कि इन्स्टाग्राम दुर्व्यसनी वा "साँचो" यात्री, संसारको सबै छ वरिपरि स्थानहरू जाँदै!
वरिपरि भटक, अज्ञात अन्वेषण, नयाँ संस्कृति पूरा गर्न प्रयास, र केहि अनुभव फरक सुन्दर छ. किन वास्तविक यात्री छैनन् भनेर हो डर बाटो बन्द टाउको गर्न. तिनीहरूले अक्सर विमानस्थलको छैन कि छैन र धेरै आगंतुकों आकर्षित छैन को सहर द्वारा बन्द गर्न चाहनुहुन्छ. युरोप यी लुकेको रत्न अक्सर केहि भन्दा एक विशेष युरोपेली देश को राम्रो तस्वीर दिन सक्छ, एक राष्ट्र एक साँचो समझ. रेल तिनीहरूलाई भ्रमण शायद नयाँ आनंद सबै भन्दा राम्रो तरिका हो परिदृश्य र जीवन को हिँड्छ. तपाईं एक यात्री हुनुहुन्छ भने, यो सूची तपाईं लागि हो.
यहाँ हाम्रो मनपर्ने युरोप लुकेका रत्न सजिलै छन् रेल द्वारा पहुँच भइरहेको कि देखेर लायक निस्सन्देह छ.
नोट: यदि तपाईं सोच्दै हुनुहुन्छ भने रेल द्वारा जाँदै बनाम बस जाँदै – विकल्प सधैं रेल द्वारा हुनुपर्छ.
1. सक्सोनी, an Eclectic Mix of Nature and History and our first choice for Hidden Gems In Europe
तुरुन्तै मानसिक ड्रेस्डेन आफैलाई परियोजनामा ​​कुनै आवश्यकता, साँच्चै. ड्रेस्डेन छ सक्सोनी राजधानी, तर यो पूर्वी जर्मन क्षेत्र केही अन्य भागहरु उल्लेख लायक, धेरै. बस ड्रेस्डेन बाहिर Konigstein किल्ला छ. र तपाईं हिड्ने आनन्द यदि, तपाईं सक्सोनी मा stonework पुल सम्झना हुँदैन राष्ट्रिय निकुञ्ज. यसबाहेक, तपाईं आफैलाई इमानदार हुन आवश्यक छ. यो गाह्रो छ जर्मनी भ्रमण र, कम्तिमा एक पटक, धेरै छैन बियर पट्टी केही मा. Luckily, सक्सोनी बुरा Schandau भनिने सानो स्पा शहर छ, एक मातेका रात पछि detoxing लागि पूर्ण. यो घर छ देखि Gluhwein आफ्नो सूची मा पनि हुनुपर्छ जर्मनी मा पुरानो क्रिसमस बजार. को जर्मन रेल नेटवर्क तपाईं आफ्नो fullest यो अनुभव प्राप्त हुनेछ त्यसैले यो क्षेत्रमा उत्कृष्ट छ.
ड्रेस्डेन गाडिहरु गर्न फ्रैंकफर्ट
ड्रेस्डेन गाडिहरु गर्न डर्टमन्ड
लक्समबर्ग ड्रेस्डेन गाडिहरु गर्न
एम्स्टर्डम ड्रेस्डेन गाडिहरु गर्न
2. लक्जेम्बर्गसिटी, एक सानो, रोमान्टिक पूंजी
तपाईं लक्समबर्ग कुरा गर्दा विचार पहिलो कुरा बैंकहरू छ. देश राम्रो ठ्याक्कै किनभने ती ज्ञात छ. तर लक्जमबर्ग गरेको steepled चर्च, पत्थर घरहरू, र साना नहरहरूले भ्रमणको भ्रमणलाई तपाईंले आशा गरेभन्दा बढी रमाईलो बनाउँदछ. त्यो हो यो स्थान किन यो महादेशमा गरेको क्यापिटल बीचमा युरोप मा दुर्लभ लुकेका रत्न को छ. यो एक सुन्दर ठाउँ, जहाँ Petrusse र Alzette नदी भेट्ने बिन्दुमा राखे. तपाईं रेस्टुरेन्टमा केही भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ र हिप बारहरू केन्द्रीय वर्ग नजिकै. यसबाहेक, Rue फिलिप द्वितीय पसलहरूमा एक गुच्छा छ, त्यसैले तपाईं राम्रो केही रुपैया खर्च गर्न तयार! पूरै लक्समबर्ग एक लागि सिद्ध स्थान छ रोमान्टिक सप्ताह.
कोलोन लक्समबर्ग गाडिहरु गर्न
कोबलेन्ज लक्समबर्ग गाडिहरु गर्न
Metz लक्समबर्ग गाडिहरु गर्न
पेरिस लक्समबर्ग गाडिहरु गर्न
3. आन्ट्वर्प: हीरे, बाइक र अधिक बियर
फेरी एकचोटी, छैन साँच्चै लुकेका मणि, तर हामी यसलाई उल्लेख थियो. कारण सरल छ. आन्ट्वर्प मा द्वारा रोक्न ठूलो ठाउँ छ आफ्नो रेल यात्रा नेदरल्यान्ड गर्न लक्समबर्ग देखि. यसबाहेक, यो शहर प्रदान गर्न धेरै छ, र तपाईं त्यहाँ रमाइलो गर्नुपर्छ. यदी तिमी साइकलको बारेमा भावुक र वास्तुकला तपाईं लिन छ "वास्तुकला भ्रमण।" यो सुन्दर नक्सामा धन्यवाद, तिमी सक्छौ शहर विशेषताहरू पत्ता लगाउन यातायातका आफ्नो मनपर्ने फारम. र तपाईं केहि रुचि भने "shinier", जाने जाँच हीरे को आन्ट्वर्प घर. एउटै समयमा, बेल्जियम बियर प्रेमीहरूको लागि ठूलो छ. प्रदान तपाईं एक हो, "डी Konick" मा एक मग लो, को आन्ट्वर्प शहर भठ्ठी.
4. Camogli, युरोप मा एक साँचो लुकेको रत्न
मात्र 45 रेल टाढा बाट सवारी को मिनेट जेनोआ, को अवश्य-देख्नुहुन्छ यो सानो माझिहरु शहर धेरै छैन. तथापि, ती जस्तै धेरै एकderrated स्थानहरू कि युरोप को साँचो लुकेको रत्न हुन बाहिर बारी, यो एक धेरै आफ्नो सूची हुनुपर्छ. यसको रंगीन घरहरू र ठाडो सडकमा संग, Camogli लामो पैदल लागि जाने सिद्ध स्थान छ. Camogli मार्फत हिड्ने, तपाईं फैंसी होटल देख्नु, पुरानो भवन, र साना बेकरी. तपाईंलाई थाहा छ अघि – तपाईंलाई यो स्थान प्रेम पर्नु छौँ! र तपाईं वरिपरि हिँड्ने थकित प्राप्त गर्दा, त्यहाँ केही शहर गरेको रेस्टुरेन्ट केही मा भोजन भइरहेको भन्दा राम्रो छ. सिद्ध समय Camogli मई हुनेछ भ्रमण गर्न, माछा समयमा तिहार. यो घटना को मुख्य आकर्षण 28-टन पैन छ. यसलाई प्रयोग गरिन्छ, तपाईं सही यसलाई अंदाजा, पकाउने माछा लागि.
फ्लोरेन्स Camogli गाडिहरु गर्न
गाडिहरु Camogli गर्न जेनोआ
रोम Camogli गाडिहरु गर्न
मिलान Camogli गाडिहरु गर्न
5. वेयमाउथ,aBeach Town in England close our list of Hidden Gems In Europe
तपाईं नजिकै डायनासोर जीवाश्मों हुँदा यसलाई युरोप मा लुकेका रत्न को एक छलफल गर्न गाह्रो छ. हो, तपाईं सही पढ्न. डायनासोर जीवाश्मों वेयमाउथ को जुरासिक तट साथ पाउन सकिन्छ. अझै, छैन धेरै मानिसहरू एक 3-घण्टा लिन निर्णय लन्डन बाट रेल सवारी तिनीहरूलाई हेर्न. विभिन्न आनन्द उठाउन सक्छौं के गर्ने व्यक्तिहरूलाई watersports र समुद्र तट मा माछा र चिप्स छ. वा ग्यास्ट्रोपबहरूमा केही मा खानाको लागि रोज्न. पाउंड क्षणमा अलिकति तल भएकोले, यो इङ्गल्याण्ड एउटा यात्रा गर्न सही समय छ. र वेममाथ भ्रमणको लागि सही समय अगस्तमा वाइमाउथको समयमा हुने थियो मेला.
Did we help with deciding which place to visit next on your upcoming adventures? राम्रो! यी पाँच ठाउँमा अझै पनि युरोप केही पता नलागेका र लुकेका रत्न हो कसरी त्यहाँ को बस एउटा उदाहरण हो. विश्व तपाईंले तिनीहरूलाई पत्ता लगाउन लागि प्रतीक्षा आश्चर्य भरिएको छ. रेल द्वारा यात्रा के तपाईं बिभिन्न कोणबाट यी स्थानहरू हेर्न मौका दिनेछु. पनि, तपाईं आफ्नो यात्रा थप पाउनेछन्. तपाईं आवश्यक छ भने तपाईंको यात्रा योजना मदत, वा तपाईंले टिकट किन्न चाहनु, कृपया हामीलाई भ्रमण SaveATrain.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhidden-gems-europe%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#Camogli #hiddemgems #सक्सोनी #weymouth antwerp europetrains europetravel लक्समबर्ग ट्रेन यात्रा सल्लाह